7 Best Food Tours Iji Ahụmahụ Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 7 Best Food Tours Iji Ahụmahụ Na Europe
Gaa na ihe njem ka otighiti gị uto buds na isonye na nri kasị mma njegharị na Europe. Ọ bụrụ na ị na uchu foodie, gị okpo ọnụ, nakwa dị ka gị Instagram oriri ga-awụli elu n'ọṅụ na ihe ị ga-enweta. N'ezie, ụzọ kasị mma ileta gastronomic amamihe aha ọjọọ obodo na Europe bụ ụgbọ okporo ígwè. Here are our top of 7 Best Food Tours Iji Ahụmahụ Na Europe.
1. Food Tours Iji Ahụmahụ Na Europe: Site Baguettes Iji Bistro Na Paris, France
Ọ bụrụ na e nwere otu obodo nke nwere ike ịkụ aka gị sọks oyi na culinary creativity, ya si Paris na ọ bụ, Ya mere, mbụ na ndepụta maka nri kasị mma njegharị na Europe. N'ihi ya, ọtụtụ nri tours na-agba ọsọ na Paris ga kama na-akpọ nri akwụkwọ n'ihi na ha na-ede akụkọ ihe mere eme na. Omenala e gafere ruo ọtụtụ narị afọ.
Mmụọ nsọ site Paris ahuhu.
Ihe niile na-kpuchie site ndị bụ isi nke achịcha na cheese ha ma ama delicacy, foie Gras nakwa dị ka arụrụ n'ụlọ rillettes na Armagnac. Na mgbakwunye, ị nwekwara ike revel na Paris Cafe omenala.
Ifufe gị site n'akụkụ n'okporo ámá na-itu n'anya onwe gị na otú ọtụtụ chic ụlọ oriri na ọṅụṅụ, cafes, delis, na boulangeries e nwere. N'ihi ya, a ga-ekpughere gị ngwakọta zuru oke nke usoro nri oge ochie na nke ọhụụ na nke na-ewu ewu na mpaghara nri.
2. Food Extravaganza: Amsterdam, Mba netherland
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ a dị iche iche n'akụkụ nke Amsterdam na ya foodie idaha, inyocha n'ogige na azụ n'okporo ámá nke Jordaan District. N'ihi ya, ị ga-ahụ ezi nri purveyors ọkụ n'obi ịkọrọ ha kere eke nakwa-enye ụfọdụ nghọta n'ime obodo bara ọgaranya Indonesian culinary nketa.
Anyị nwere ike ikwu na ị na-agbalị na-apụl achịcha na iconic 400 afọ Cafe, Cafe Papeneiland. I nwere ike na-agbalị na-ese siga soseji mere si a na narị afọ iri na ezinụlọ Ntụziaka ma mụta Dutch ụzọ eri azụ asa.
3. The Art Of Nka Beer & Food Na Prague, Czech Republic
Ọ bụrụ na ị na-ahụ onwe gị na Prague, ime ihe hipsters eme na-enwe a craft biya nakwa dị ka a nri tour. Ị nwere ike ọbụna iri a tour na a biya ọkachamara. Ha ga-enwe obi ụtọ ime ka ị na a Pivo (biya) njem n'adịghị ihe ọ bụla ọzọ.
ndammana, craft biya na-mgbe na-enwe site na-eri a ole na ole nhọrọ obodo morsels. Na mgbakwunye, nama ọ nwere ike na-agbalị Scotch àkwá ma ọ bụ Czech dumplings na braised beef aha ma a ole na ole nke foodie akụ nke Prague. Ọ bụ a anya n'ihi na anyị na ndepụta nri kasị mma njegharị na Europe.
4. Food Tours Iji Ahụmahụ Na Europe: Age-Old omenala Na Madrid, Spain
N'ihi na a bonafide foodie njem, Madrid anaghị tụkwasịrị! Meander site Madrid na zuko obodo mgbere na restaurateurs. Gbalịa obodo wine na cheese-enwe obi ụtọ ahụ mere ihe akụkọ Anton Martin Market. Nwere ụfọdụ n'ime, achọghị ịzụ, nke kacha mma cheesecakes na ụwa, ụfọdụ nke na-ghere narị afọ Ighe.
5. Esi ísì The City Site An Insiders Ele: Venice, Italy
AKWỤKWỌ a tour ma ọ bụrụ na ị na-achọghị ka bugara na Venice. Book na onye maara ins na outs nke obodo ahụ na-esi ike zere ìgwè mmadụ na ka ị chọta ụfọdụ zoro ezo bara nnukwu uru. Dị ka ọmụmaatụ, iri a gondola ride gafee kanaal ka a pasta restaurant na-aṅụ otu iko prosecco tupu ị lelee ụfọdụ ama wine Ogwe, na-ewu ewu na obodo Casanova si.
6. Food Tours Iji Ahụmahụ Na Europe: The International Food Scene Na Berlin, Germany
Berlin nri idaha bụ nri na-emekarị na mba nri gold, n'ihi ya kwa, ọ bụ ebe kachasị mma iji mete ndị enyi mgbe ị na-eme njem nri. Ọ dịghị ihe na-eme ka ndị ọnụ ezi dị ka nri na-eme.
Anyị nwere ike ikwu na ị na-atụle a ahaziri nri tour na a obodo ebe i nwere ike tụgharịa gị aka uwe na idozi onwe gị a omenala oriri, Berlin-style.
Ọ bụrụ na ị na-achọghị ime ka ihe niile onwe gị:
Lelee Market Turkish nke Kreuzberg ma ọ bụ mee nkwụsị (ma ọ bụ atọ) na dị iche iche cafes na bakeries.
7. An ezigbo Foodie Ahụmahụ: Vienna, Austria
Vienna bụ niile amara, Otú ọ dị nke a bụ eziokwu karịsịa mgbe ọ na-abịa na-amasị. Ọ nwere a palpable ziri ezi ma na ị ga-amalite na a nleta a classic Viennese kọfị ụlọ. Site kọfị ụlọ, ị pụrụ ime ka ụzọ gị na-ewu ewu Naschmarket, a omenala mkpuru na a dịgasị iche iche nke Austrian specialties na-agụnye cheese na mmanya.
Ọ bụrụ na ị na-eri a soseji na-ewere a eserese nke ya na gram mgbe ị na Wurstelstand, ndị gị ọbụna n'ebe ahụ? 🌭But n'ezie, ha nwere sọseji kachasị ịtụnanya! Asa ya ala na ụfọdụ Austrian mmanya na a akụkọ ihe mere eme okpuru ulo na-agwụ ya niile anya n'ụzọ zuru okè na ụfọdụ delish eji megharịa ọnụ site na ịga na a oké chocolate shop. 🍫
Food Tours Iji Ahụmahụ Na Europe: mmechi
The nri kasị mma njegharị na Europe na-iji nanị ịfụ uche gị na okpo ọnụ. E nwere ọtụtụ nhọrọ.
Ebe ọ bụla ị na-aga, agagharị site na Ndepụta nke njegharị ahụ ga-kacha mma uwe ị.
Họrọ ihe ị ga-achọ ahụmahụ na ojiji Save A Train maka ụgbọ oloko gị njem mkpa.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “7 Best Food Tours Iji Ahụmahụ Na Europe ” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-food-tours-europe%2F የሰማይ አካላት– (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)